Ii-FAQs - i-Shanghai Chunye Instrument Technology Co, Ltd.
Yintoni ubungakanani be-odolo encinci?
MOQ: ngokubanzi iyunithi / isiqwenga / iseti
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezixhaswayo?
Indlela yokuhlawula: NguT / T, L / C, njl.
Imigaqo yokuhlawula: Ngokubanzi, Samkela i-100% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Zeziphi iindlela ezikhoyo zokuhambisa?
Indawo yethu yezibuko: iShanghai
Ukuhambisa: KuHlabathi liphela
Ukuhambisa indlela: elwandle, ngomoya, ngelori, ngokuhambisa, ukuthuthwa okuhlangeneyo
Mude kangakanani umhla wokuhanjiswa kwemveliso?
Umhla wokusiwa wahlukile kuhlobo lwemveliso, ubungakanani beodolo, imfuno ekhethekileyo njl.njl. Umhla wokuhanjiswa komatshini omkhulu ujikeleze iintsuku ezili-15 ~ 30; izixhobo zovavanyo okanye umhla wokuhanjiswa kohlalutyo ujikeleze iintsuku ezi-3 ~ 7. Ezinye iimveliso zinesitokhwe, nxibelelana nathi nanini na ukufumana ulwazi olungaphezulu.
Lixesha elide kangakanani iwaranti?
Siyaqinisekisa ukuba umzi-mveliso unikezelwa phantsi kwemigaqo ekuvunyelwene ngayo ngokuchasene neziphene kwinto yokusebenza nokusetyenziswa kwesiqhelo kunye nenkonzo kangangesithuba seminyaka eli-1 emva kokuqala kwenkqubo.
Zinjani iinkonzo zobugcisa kwimveliso?
Wamkelekile ukuba unxibelelane nathi nangaliphi na ixesha ukuba unayo nayiphi na imibuzo yobugcisa. Siza kuphendula ngokukhawuleza kwaye siphendule ngokwoneliseka kwakho. Ukuba iyafuneka kwaye iyimfuneko, iinjineli ziyafumaneka kwinkonzo kwaye zibonelele ngenkxaso yobuchwephesha koomatshini baphesheya.
Isenzi woluvo sokuSebenza kwe-Electromagnetic, Quadrupole Umsizi wokuSebenza woluvo, Ukuqhuba kwe-TDS Isenzi woluvo, Isilumko sokuSebenza kweTitanium, Isilumko seChlorophyll, Ph woluvo Electrode,